UMLAWULI WABAFUNDI UCHAITANYA TAMHANE: UALFONSO CUARON UNDINCEDILE NDAFUMANISA ILIZWI LAM - HOLLYWOOD
Umlawuli wabafundi uChaitanya Tamhane: UAlfonso Cuaron undincedile ndafumanisa ilizwi lam
Kwiminyaka eyi-17, uChaitanya Tamhane wayesakha ithala leencwadi leDVD endlini esebenzisa imali efunyenwe ngokubhala iisepha zeBalaji tv. Kwiminyaka eli-16 kamva, umlawuli uzimisele ukukhuphisana noMnyhadala weFilimu waseVenice noMfundi, oye waveliswa ngurhulumente ophumelele u-Oscar u-Alfonso Cuaron.
Kudliwanondlebe ne-ndianexpress.com, uChaitanya uthetha ngohambo lwakhe ukusuka kwindawo asebenza kuyo uBalaji esiya kwiNkundla yakhe yoWiso-Mbasa kuZwelonke eya kuMfundi, eqeqeshwa nguAlfonso Cuaron kunye nendoda enye eyamncedayo ukuba ahlukane nomtsalane webhanyabhanya ephambili.
Nazi izicatshulwa ezivela kwincoko yababini:
Q. Uhambe ngendlela yesabelo sakho somzabalazo wokwenza iNkundla. Ngaba impumelelo yayo yenza ukuba uhambo loMfundi lube lula?
Lowo ngumbuzo onomdla ngokwenene. Ewe, kwezinye iindlela kwakulula ngenxa yokuphumelela kweNkundla kwandikhokelela ku-Alfonso Cuaron njengoko ndandidla ngokumenywa ukuba ndisebenzise inkqubo ye-Rolex yokucebisa (i-Rolex Mentor kunye neProtege Arts Initiative), kwaye ngokuqinisekileyo abantu babonwabile ube yinxalenye yoMfundi ngenxa yenkundla yabo abayithandayo. Kodwa kwicala lezemali, yayinguVivek (Gomber). Uninzi lwabantu luye lwatsho ukuba izakuba lula kum ukufumana inkxaso-mali kwihlabathi liphela okanye abathengisi, nangona kunjalo akukho nto yenzekileyo, ebonisa ngendlela.
Oko kundenza ndizibuze ukuba ingaba umzabalazo wam uza kuphinda uphinde ube ngumhla we-Vivek uphelelwa yimali. Ngethemba, oko ngekhe kwenzeke (kuhleka). Kodwa injongo kukho indoda enye kuphela enoluhlobo lwenkolo engapheliyo kum nomsebenzi wam nokuba uyazi ukuba ayisiyiyo eyona mishini ishishini.
Ehlabathini lonke, iifilimu ze-arthouse ziveliswa zisebenzisa imali yeziko okanye ukuveliswa ngokubambisana kunye neendawo ezahlukeneyo zamazwe ngamazwe. Asinayo nayiphi na loo nto. Yimali yomntu omnye kuphela. Ityhila ngendlela, hayi?
Q. Ewe. Abalawuli abazimeleyo bathi bafumana iifowuni ezininzi ezenza iziqinisekiso ezinkulu, nangona kunjalo xa kusenziwa iimovie, iifowuni aziphendulwa.
Uphi umlingisi wolwandle lwe laguna ngoku
Ndifumene umjikelo wesine nesihlanu kunikwa kumakhaya aphambili okuvelisa, besithi banokufuna ukuvelisa imovie yam elandelayo ngaphandle kokuba akukho namnye kubo obone iNkundla. Baye beza kum ikakhulu ngokusekwe kumaphephandaba ukuba bafundile kunye namabhaso endiwafumeneyo. Bendihlala ndifana, Kutheni ungaqali ubukele imovie? Kuhlekisa ngokubanzi.
Q. Ekuqondeni kwam, niyazi ukuba nibhaka kubunzima. Ubungazi nto malunga nomculo weklasikhi waseIndiya wakuba uthandile kwaye uzimisele ukwazisa ibali lakhe kumboniso kunye noMfundi. Ukhetha ukuthatha ukuthatha ixesha elide, kuxhomekeke ekunciphiseni ukuguqula. Ikhosi yakho yophicotho-zincwadi iphelele-unqwenela iimarathi zithetha iimvumi kwi-forged yakho yoMfundi, njalo njalo. Ngaba oku kuyazenzekela kuwe?
(Uhleka) Uthinte isibini sezinto ezithile, kwaye kukho izisombululo ezahluke ngokupheleleyo kuyo yonke into ethathelwa ingqalelo. Kum, yimfuneko yokubaliswa. Umzekelo, saphicotha abadlali, nangona kunjalo safumanisa ukuba kunokuba kufutshane ukuba kungenzeki ukuba baqonde umculo ixesha elide ngenxa yokulangazelela kwam ukuthatha ixesha elide, ngaphandle kokuphazamiseka. Ukuba banike ingqalelo yokukhumbula amabinzana omculo, ukubonakala kwabo kuya kuhamba. Sacinga ukuba kungangcono kube lula ukufumana iimvumi ukuba ziziphathe.
Ewe, ikhosi ejolise kwiinkcukacha kakhulu kuba ufuna ukwenza ubume kunye nokunyaniseka kweyona ndlela ibalaseleyo. Ke, asizomculo zobuqhetseba ezizodwa kodwa nangona kunjalo safumana ngqo abahlali beekonsathi kunye nabathandi bomculo kubalinganiswa bemvelaphi.
Sasidinga ukuphicothwa ukuba uninzi lwabantu ngenxa yesiziba sasibhityile. Kwakudingeka ukuba umntu othetha isiMarathi, ugqirha womculo waseKhayal. Kufuneka badibanise ngokomzimba ibango lomlinganiswa. Kufuneka babe nomdla kwaye banokuba nomthambo obonakalayo womzimba wabo ukuze bathumele izinto ezibhaliweyo kwaye bangaze boyike ekungeneni kwekhamera yedijithali. Kwakunzima ke oko.
Ngokulungisa, ayisiyiyo ukuba andiyikhethi. Isampulu yokuguqula le movie yayihluke ngokupheleleyo kuleyo yeNkundla, nangona kunjalo oko kuyahambelana nemfuno yebali. Kodwa kuyinyani ndithanda ukungaphazanyiswa kuthatha iifoto ezinkulu.
yintoni imibimbi kwinombolo yefowuni ehlekisayo
Q. Kuthekani ngokungena kwindawo engaziwayo? Njengabafundi.
Ndibufumanisa obam ubomi buyabhoreka kakhulu, abukho kwaye besiqhelo. Ndidikwa ngokulula. Ke mna, yinto engakholelekiyo ukuziqeqesha ngokwam, ukujonga kunye nokungena kweli hlabathi lahlukileyo ndilifumanayo. Ke, iyajika ibe ngathi ngumtshato wolusu kunye nangaphakathi.
Umzekelo, uMfundi ubhekisele kuhambo lomculi weklasikhi, nangona kunjalo andicingi ukuba kwenzeka ntoni kumdlalo bhanyabhanya njengohlobo lobugcisa kwisithuba senkulungwane yamashumi amabini anokubahluke kakhulu kwinto eyenzeka kumculo. Kubucala kakhulu kuhambo lwam njengomenzi wefilimu. I-Cinema ayinakunxulumana ngendlela efanayo eyayingaphakathi kwenkulungwane yamashumi amabini. Ayikokhuselo okanye indlela abantu abayisebenzisa ngayo. Ke, ndikhangela ukufana kunye nokwahluka phakathi kwala mazwe mabini.
Ihlabathi lomculo weklasikhi linxilisayo. Ityebe kakhulu kubo bonke ubunzima bayo, amabali kunye nokuphikisana kangangokuba bekungafuneki ukuba ndenze lukhulu ukuyithanda.
Q. Ungamchaza njani uMfundi?
Luhambo lwe-Indian classical vocalist okhuliswe ngutata wakhe kwaye wabethelelwa kulo mculo. Ukhulele kwezi ntsomi zeenkosi zangaphambili, idatha ephambili kunye nezoyikisayo, uhlobo lobugcisa obuphambili abazama ukulunga. Uhlobo lwexabiso elikhutshelwa ziimvumi. Kodwa ukongeza ngokuzama ukukhangela ubomi obunengqiqo, obububo.
Iyafana nje nale nto uyithethayo ngabenzi beefilimu abangakhethiyo ukuya kuthi ga ngoku eMumbai. Ke uMfundi uphonononga le mibuzo yento esulungekileyo nokuba yintoni na lo mculo nendawo yawo nohambo lwawo njengesiphumo senkcazo yethiyori kunye nengqiqo.
Q. Kwakunjani ukuba no-Alfonso Cuaron azikhathaze ngoMfundi ngesizathu sokuqala oko?
Kwakufana nokuba nokubamba okanye ingcali exhamla kakhulu kunye neengcebiso zayo. Mna, enyanisweni, ndicinga ngaye ethathelwa ingqalelo enye ye-gurus yam nangona kunjalo ukongeza njengomhlobo olungileyo onexabiso. Akanayo loo vibe yomcebisi. Upholile, uzolile kwaye uyathandeka. Siphazamisa iimeko ezininzi. Kodwa kwimeko ye-cinema, unzima kakhulu kwaye unoluvo.
Kodwa kwakungekho ndlela iphazamisayo okanye eyalelayo into endifanele ukuyenza. Ngamaxesha onke iingcebiso kunye nezimvo. Xa kubandakanya umntu wesiqu sakhe, nokuba ingamashumi amane anesihlanu okanye imizuzu engama-30 yencoko yababini inokukunika okuninzi ukuba ukufundiswe kwaye uvule iingcinga zakho oqala ngokucinga ngenye indlela. Undincedile ngokuhlela. Uye wasebenza nam kwiskripthi, kwaye uyaqhubeka nokundincedisa kule nto epheleleyo.
Q. Loluphi olona tshintsho lubonakalayo unokuluva ngaphakathi ukusukela oko wazimanya neCuaron?
UAlfonso undityhalela ekubeni ndingoyiki. Kumenzi wefilimu ongenamkhethe, kwiingcinga zakho, izithintelo ziza kuqala. Uzibamba ngokwengqondo, ucinga, 'Asinayo imali. Iyakwenzeka njani lento? Iyakwenzeka njani loo nto? ’Undityhalele ukuba ndibeke intelekelelo nengqondo phambili phambili kuyo yonke imiba.
Hlu ixesha lokukhanya 2
Undixelela ukuba ndibuze isibhakabhaka, injongo yayo, ungoyiki emva koko uthathe ingqalelo eseleyo. Uthi ukuba intelekelelo kunye nengcali yolwazi ikhona, intsalela iya kuqaphela. Olu lolona tshintsho lubaluleke kakhulu kum. Ewe kunjalo, kukho imicimbi eyahlukeneyo kwisidanga esiqiqayo kunye nezobugcisa kwimeko yokwenza ifilimu.
Kwinqanaba lendlela, kunjalo. Le ikwayikhosi eqhubekayo ngenxa yokuba ndiligwala kancinci, ndingenisa ngaloo ndlela. Ngawo onke amaxesha undityhalela ekubeni nesibindi ngakumbi. Andinjalo ekwenzeni ifilimu, nangona kunjalo kwimeko yobomi, ndinethemba elongezelelekileyo.
Q. Uwuqaphele ngenyameko umsebenzi wakhe, ukuqonda kwakhe ubugcisa. Ngaba loo nto inika ukhetho kwiimpembelelo ezibonakalayo zomsebenzi omnye, xa umntu enobungcali obusondeleyo kunye nokhokelo oluhle?
Owu, ewe, ngokupheleleyo! Kufana nabenzi beefilimu ababini abathetha ngaphandle kokuba omnye wenze iimuvi ezisixhenxe okanye ezisibhozo ezongezelelweyo kwaye unemithombo eyongezelelweyo. Ke, ubonile iimonons ezingaphezulu kunam. Ukwelinqanaba elahluke ngokupheleleyo ebomini bakhe. Oko akuyonto iphazamisana kunye nembono yakho yehlabathi okanye umntu oya kwenza imovie. Ukuba kukho into, unikwe amandla ngaloo ndlela. Undincede ndedwa ndafumanisa elam ilizwi kunokuba ndinyanzelise elakhe.
Ngokwenyani, wayexhamla ngokwaneleyo ukuba athi xa eqaphela iNkundla, wafumanisa ukuba imovie awayezakuyenza-i-Roma-yayinolwimi oluhambelana ngokwenene. Ke, ugcina egxininisa ukuba yindlela emibini yencoko kunye nencoko.
Q. Ingaba awuvumelani njani omnye nomnye?
Zininzi kakhulu. Kodwa oko kuyongezwa ngenxa yeziganeko ezininzi esiqhula kuzo, kwaye ngamnye wethu unezimvo ezizinzileyo malunga nemicimbi. Ngamaxesha onke utsala umlenze wam, kwaye andivumelani ngokukodwa kunye nezityholo zakhe ngokwesiko malunga nam kunye nesimbo sam esibi.
Q. Ngaba ithe gca kwimbono eyahlukileyo ekungeneni komenzi wefilimu owaziwayo oye wakuqeqesha?
Ayilulo olo hlobo lobudlelwane. Ayisiyo ngxelo efanelekileyo. Kodwa enyanisweni, ndizaliswe yimbeko kunye nombulelo kuye. Andikhe ndinqumle umgca ngenxa yokuba uxakeke kakhulu, esenza imiba eliqela. Kodwa ngalo lonke ixesha sidibana okanye sixoxa, sithatha isigqibo malunga nendawo esishiye kuyo.
Q. Ujonga njani kwakhona kwiminyaka yakho yokuqala ngaphakathi kwishishini wakuba ubeka ekubhaleni iisepha zetv?
Bendihlala ndingenangqondo, ndifumana imali eninzi, kwaye imeko yemali ekhayeni lam yayingekho kakuhle. Yayiyimali enkulu kum. Kuyathakazelisa kakhulu ukuba imali endiyenzileyo ndisebenzisa iTV, ndiyisebenzise ekwakheni ilayibrari yeDVD endlwini. Yileyo ndlela ndibukele ngayo i-cinema yehlabathi. Ndidibene nabaninzi abacebisi bam kuloo ndawo yokusebenzela yaseBalaji.
Abo yayingabantu ababevela kwi-NSD kwaye babengabalandeli beemovie zehlabathi. Bacebise uninzi lweemovie ukuba zijongwe. Yiyo indawo yokugqibela onokuyibala kwi-cinephiles kunye nabathandi be-cinema zehlabathi.
Ewe kunjalo, omnye unamava angenampilo, nangona kunjalo konke oko kuyanceda. Zonke iimpazamo ozenzayo, zonke izinto ezingenampilo ozibonayo zenziwa ngabantu abahlukeneyo, uthi isiqu sakho ngekhe uyenze le ayisiyiyo loo mntu kuya kufuneka ukuba ube yiyo. Ke, ndafunda iiklasi. Andizisoli nakancinci.
Q. Ke, yeyiphi into enjalo oqinisekileyo ukuba ngekhe uyenze njengomenzi wefilimu?
Ndasebenza kwimidlalo yeqonga, ndenza imuvi emfutshane, ndathatha inxaxheba kukhuphiswano lweqonga oludibeneyo phakathi kwabafundi. Yonke loo nto indifundise ukubaluleka kobungqongqo kunye ne-vibe oyibandakanya nawe. Ungayiphatha njani i-egos, ukhokele abasebenzi kwaye ube nembeko kwaye unombulelo ngomsebenzi abanye abawenzayo ukuze babambe iingcinga zakho kunye nolwazelelo. Ke, zonke ezi zinto zikwenza ube ngumlawuli.
Q. Ndiqaphele ukuba wabelana kudliwanondlebe ukuba ngexesha elinye, ubusecicini lokuncama ubomi bakho. Phantse iminyaka eli-10 kamva, uzilungiselela ukukhuphisana kwiVenice Film Festival. Olo luhambo olukhulu kakhulu. Ngaba usayikhumbula okwesibini wakuba uzimisele ukuthatha inkolo yenkolo kwaye uzakha ngokwakho?
Ngokunyaniseka, yayingendim. KwakunguVivek Gomber owathatha loo nkolo yenkolo. Nguye owandinika ubukroti kunye nokuncedisa - elowo ngomoya nangemali - ukwenza into endinqwenela ukuyenza. Kuthathe unyaka onesiqingatha ukuba ndibhale umbhalo weNkundla, kodwa nangoko akazange azame ukundingxamisa okanye andibuze. Wayefana, 'Musa ukoyika malunga nayo.' Kwakungekho ukuzinikezela kwakhe ngokuzingca ngamalungelo eskripthi okanye ukuba wayeza kwenza imovie okanye ayenze. Kwakungekho meko injalo.
sami miro imvelaphi yobuhlanga
Nje ukuba afunde iskripthi, wandicela iinyanga ezimbalwa ngenxa yokuba wathi, ‘Ndifuna ukuyibona le movie.’ Emva koko wafika apha emva kweenyanga ezimbalwa wathi masenze oku. Bendihlala ndina-24 enesiqingatha ngoko. Yile ndlela eyenziwe ngayo loo movie. Nokuba uMfundi, nguye nje.
Ndiziva ndinethamsanqa kakhulu ukuba nomntu onje ngeVivek ngenxa yoko ayinayo imeko kukhetho lwembasa okanye amabhaso. Ngamaxesha onke ebesulungeke kakhulu kwaye enyanisekile kule ndlela. Kuye, le ndlela iza kuqala, kwaye umphumo awungeni ndawo. Yiyo loo nto xa umntu endincoma esithi, 'Owu, kuyancomeka ukuba wenza umsebenzi wakho kwaye awusoze uwele kwimigibe yeshishini eliqhelekileyo,' maxa onke ndithi kungenxa kaVivek ondenze ukuba ndibenje uze uligcine ilizwi lam.
Izigaba: Umqala Hulu Inetflix
max ehrich net efanelekileyo nge2020
Ixesha lomceli mngeni labaphangi abangama-30 abaphumeleleyo
Ujames richard wilson jr.
deshaun watson utata wanika richardson
ngubani ophumelela hoh kumzalwana omkhulu ngokuhlwanje
iziko laseKennedy lihlonipha umhla womoya ka-2018